Xafladii Madaxweyne Garguurte ee London oo ku dhamaatay qabyaalad iyo xumaan.
Saxaafadu Malahan Saaxiib Joogtaa Waagacusub Media 2013
Topnews:-Madaxweyne Garguurte walaashiis oo ka mida Marqaatiyada Wariye Koronto +Dukumiintiga akhri
05 Febraury 2013 Waagacusub.com- Warbaahinta Waagacusub ayaa heshay Dukumiinti cadeeynaya in haweeneey la dhalatay Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow oo lagu magacaabo Nuurto Mohamud Alasow ka mid tahay dad loo diyaariyay inay marqaati beena ku furan shann Maxaabiisa oo ay ku jiraan gabadh la kufsaday iyo Wariyahii wareeystay oo dhamaantood ku xiran Xabsiga Muqdisho.
Gabadha la kufsaday oo 27 Jir ah waxaa lagu magacaabaa Luul Cali Cusman halka Wariyaha Wareystana oo 25 Jir ah la yiraa Cabdi Casiis Cabdi Nur Ibrahim.
Arrinta la yaabka leh waxay tahay in Madaxweyne Garguurte Walaashiis ka mid tahay shaqsiyaadka ku qoran liiska Marqaatiyaasha.
Sida ku cad Dukumiintiga eedeysanayaasha u xiran xaqdarada waxay dhamaantood ka soo jeedaan gobolka Bay gaar ahaan Baydhabo iyo Buurhakaba taas oo ka dhigan in dadkaas yihiin LOOMA OOYAAN.
Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow oo kursiga Madaxtooyada ku fadhiya shan bil ka yar hadii uu bilaabay inuu marag fur beena u adeegsado Walaashii iyo dad u dhashay ehelkiisa waxay su-aashu tahay MAXAA LA FILI KARAA MAALINTA UU NOQDO HOGAAMIYE AWOOD LEH?
Somalia waxaa burburiyay Cadaalad daro sidaas darteed waxaa gudboon in Shacabka Soomaaliyeed ka dhiidhiyaan Cadaalad darada iyo awood ku faanka lagu xiray shanta qof .
Haweeneeyda la xiray ninkii qabay ayaa loo xiray waxaad naagtaada raali uga aheyd inay bixiso Wareysiga ay ku sheegtay kufsiga.
Tani waa arrin murugo leh oo ka marqaati kacday inay Somalia xukunkeeda qabsadeen koox ka arxan daran,kana halis badan Al-Shabaab.
Wariyaha wuxuu cod siiyaa dadka aan codka laheyn sidaas darteed looma xiri karo wareeysi maqal ama muuqaala oo qof dhib sheeganaya uu ka qaaday.
Si kastaba ha ahaatee, Bal si fiican u akhri Dukumiintiga Xeer Ilaaliyaha soo saaray.
Sii akhri Wararkeena Waagacusub.com